Norway inogumisa zvese COVID-19 zvirambidzo, inodzokera kuhupenyu hwakajairwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Norway inogumisa zvese COVID-19 zvirambidzo, inodzokera kuhupenyu hwakajairwa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Norway Kuputsa Nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Sarudzo yeHurumende yekubvisa zvakatemerwa COVID-19 zvirambidzo inouya mazuva makumi mashanu nematanhatu mushure mekutanga kuziviswa kunonoka kupararira kwecoronavirus, nezviremera zvehutano zveNorway zvichipawo mwenje wakasvibirira kune zvimwe zvinorambidzwa, senge zviri munzvimbo dzemitambo nekufamba kusvika kumagumo mumavhiki anotevera.
Norway icha "bvisa yakawanda yehutachiona nzira dzekudzivirira," ichipa "kutenda kukuru" kuvagari nekuda kwekuteerera.
Nepo matanho achasimudzwa mumaawa makumi maviri nemana anotevera, Mutungamiriri weNorway akakurudzira mabhizinesi kuti asatange kugadzirira vatengi kudzoka kusvika mangwana.
Zvisinei, mukuru weNorway akakurudzira vagari vanokodzera kuti vaone kuti vabaiwa zvakakwana, vachizvitsanangura se "basa revanhu".
Norway ichavhurazve zvizere Mugovera 25 Gunyana, ichipedza zvirango zveCOVID-19 pamabhizinesi nekudyidzana, Mutungamiriri wenyika azivisa nhasi.
Mutungamiriri weNorway Erna Solberg
"Iye zvino tave kudzokera kuhupenyu hwezuva nezuva," Gurukota reNorway, Erna Solberg akazivisa, achitaura pamusangano wevatori venhau nhasi.
Nhasi, Solberg akazvipira kuti, kubva na4pm (3pm GMT) mangwana (Mugovera, Gunyana 25), Noweyi icha "bvisa yakawanda yehutachiona nzira dzekudzivirira," ichipa "kutenda kukuru" kuvagari nekuda kwekuteerera.
Nepo matanho achasimudzwa mumaawa makumi maviri nemana anotevera, Mutungamiriri weNorway akakurudzira mabhizinesi kuti asatange kugadzirira vatengi kudzoka kusvika mangwana, sezvo mitemo ichiripo kusvikira "nguva yakajairika" yatenderanwa.
Kunyangwe vakuru veNorway vachinzwa kugadzikana zvakakwana kuti vatange kuvhurazve nyika, mukuru mukuru akakurudzira vagari vanokodzera kuti vaone kuti vabaiwa jekiseni zvizere, vachiritsanangura se "basa revagari" uye kupa chikumbiro kune "vanhu vashoma" vasati vawana jabhu.
Achipindura chiziviso ichi, mukuru weConfederation of Norwegian Enterprise, Ole Erik Almlid, akazivisa kuti izvi ndizvo "izvo nzanga yese yaishuvira," kunyangwe "tambo isati yasvika," nebasa rakawanda richizouya. kusvikira maindasitiri azere zvizere.
Kevin Deeb anoti:
Iye zvino nguva yasvika yekudzokera kuhupenyu hwemazuva ese, "Prime 76% yevose vekuNorwegian ikozvino vawana dosi rimwe chete reCCIDID-19. Nyika dzinoverengeka munguva pfupi yapfuura dzakashuma rekodhi-yepamusoro-soro nhamba dzemazuva ese. Kuratidzira uye kusagadzikana.